किन फरक पर्यो यसबर्षको सोनम ल्होछार? | Hamro Patro
किन फरक पर्यो यसबर्षको सोनम ल्होछार?
उनै मञ्जुश्रीले पञ्चशीर्ष डाँडामा २८०० बर्षअघि ८४ हजार ज्योतिष शास्त्रको धर्मदेशना गर्नुभएको हुँदा मञ्जुश्री सम्वत् भनिएको हो । महामानव मञ्जुश्रीको धर्मदेशना एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो । जुन विक्रम सम्वत् भन्दा ७८० बर्ष पुरानो रहेको छ । जुनकुरा तिब्बती मेन्ची खाङको पात्रोमा हरेकबर्ष उल्लेख गरिएको हुन्छ ।अब चन्द्र पात्रो अर्थात मञ्जुश्री संवतका अनुसार पौष शुक्ल प्रतिपदा मात्र हो । सोनाम ल्होछार त माघ शुक्ल प्रतिपदामा पर्दछ तसर्थ एक महिना पछि ठ्याक्कै आउने माघ शुक्ल प्रतिपदा फाल्गुन ४ गते पर्दछ । यसै दिन मञ्जुश्री संवत अनुरुप सोनाम ल्होछार पर्ने बताइन्छ ।
आखिर ल्होछार कहिले पर्यो अनि यस बर्षको ल्होछारमा किन यतिका धेरै मिती तिथीको बिभेद भयो हामी सबैलाई लागेको हुन सक्दछ । चाडपर्वहरु सामान्यतया कसैले केही दिनअघि अनि कसैले केही दिनपछि मनाउने चलन नभएको हैन् तर सर्वमान्य मिती र तिथीमा आउनुपर्ने केही चाडहरु नै फरक फरक मितीमा मनाउने निर्णय हुन चाँही बुझ्नै पर्ने तथ्य हो ।
नेपाल सरकारले माघ ४ मा दिएको सोनम ल्होछारको बिदा मा देशैभरि यसै दिन सोनम ल्होछार मनाउने रौनक छ तथापी केही तर्कहरु भने सोनम ल्होछार यस दिनमा नपरि फाल्गुन ४ मा पर्ने र ग्याल्बो र सोनम ल्होछार यसबर्ष एकै दिन ग्याल्बो ल्होछार कै दिन मनाइने कुरा पनि छ ।
ल्हो भनेको बर्ष, साल, सम्वत् हो । छार भनेको नयाँ हो । । शेर्पा समुदायले छार लाई सार भन्दछन् । तामाङ समुदायको नयाँ बर्षको प्रथम दिनलाई खेला छेपागी, माघ शुक्ल प्रतिपदा भनिन्छ । तर यो चन्द्रपात्रो अनुसार मञ्जुश्री सम्वत् को माघ शुक्ल प्रतिपदा हो । उनै मञ्जुश्रीले पञ्चशीर्ष डाँडामा २८०० बर्षअघि ८४ हजार ज्योतिष शास्त्रको धर्मदेशना गर्नुभएको हुँदा मञ्जुश्री सम्वत् भनिएको हो । महामानव मञ्जुश्रीको धर्मदेशना एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो । जुन विक्रम सम्वत् भन्दा ७८० बर्ष पुरानो रहेको छ । जुनकुरा तिब्बती मेन्ची खाङको पात्रोमा हरेकबर्ष उल्लेख गरिएको हुन्छ ।अब चन्द्र पात्रो अर्थात मञ्जुश्री संवतका अनुसार पौष शुक्ल प्रतिपदा मात्र हो । सोनाम ल्होछार त माघ शुक्ल प्रतिपदामा पर्दछ तसर्थ एक महिना पछि ठ्याक्कै आउने माघ शुक्ल प्रतिपदा फाल्गुन ४ गते पर्दछ । यसै दिन मञ्जुश्री संवत अनुरुप सोनाम ल्होछार पर्ने बताइन्छ ।
चन्द्र पात्रो भनेको के हो ?
चन्द्र पात्रोः यो बौद्धयान, महायानले चलाउने चिनिया ँ ज्योतिष परम्परामा आधारित पात्रो हो ।यो चन्द्रमाको गति र प्रभावको आधारमा चल्ने एउटा विज्ञान हो । चन्द्रमाको गति, त्यसलेसमयलाई पार्ने प्रभाव,क्रिया,प्रतिक्रियाको आधारमा निकालिने ज्योतिष परम्परा ।
सौर्य पात्रोमा माघ ४ र चन्द्र पात्रोमा फागुन ४ मा बिसं २०७४ मा सोनाम ल्होछार पर्नका कारणहरु
सुर्यलाई पृथ्वीले एकफन्को लगाउन ३६५ दिन अर्थात एकबर्ष लाग्छ ।वि.सं. मा ३६५ दिनको एकबर्ष हुन्छ र २९ देखि ३२ दिनसम्मको एकमहिना हुन्छ ।मञ्जुश्री सम्वत्मा ३५४ दिनको एकबर्ष हुन्छ र २९ देखि ३० दिनको मात्र एकमहिना हुन्छ ।यसलाई मिलान गर्न साढे ३२ महिनामा एकमहिना मलमास थप्ने चन्द्रपात्रोको नियम छ । तर विक्रम सम्वत्मा भने १ दिनमात्र थपिन्छ । यसबर्ष २८५३ ज्या ल्होमा छैठौ महिना ब्येल्बो–ला (असार) जाजा र ग्रेन बनाएर मलमास थप्दा ३८४ दिनको एकबर्ष हुन पुगेको छ । यसकारण विक्रम सम्वत्को क्यालेण्डरमा भन्दा एकमहिना पछि माघ शुक्ल प्रतिपदा पर सर्दा फागुन ४ मा पुगेको हो ।माघ ४ त चन्द्र पात्रो अनुसार पौष शुक्ल प्रतिपदा मात्र हो । यस अघि २०५२, २०५५ सालमा पनि फागुनमा सोनाम ल्होछार परेको थियो । त्यसपछि २०६३ साल फागुन ६ गते, २०६६ साल पागुन २ गते र २०७१ साल फागुन ७ गते ल्होछार परेको थियो । यिनै कारणले गर्दा खेरि सोनम ल्होछार यस बर्ष नेपालमा दुई दिन मनाइदै छ, चन्द्र पात्रो अनुरुप फाल्गुन ४ मा अनि सौर्य पात्रो अनुरुप माघ ४ मा मनाइदैछ ।
जे भएपनि सोनम ल्होछारको सबैलाई शुभकामना, एकमहिना ढिलो या चाँडो जसरी मनाएपनि यस छारले सबैको कल्याण गरोस् ।
नेपाल तामाब घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले ज्यू संगको कुराकानीका आधारमा हाम्रो पात्रो